Tafakatra 43 ireo tratran’ny coronavirus: vazaha iray marary efa any ivelany nitety faritra maro teto amintsika | NewsMada
Par Taratra sur 30/03/2020
Tafakatra 43 hatramin’ny, omaly hariva, ireo olona fantatra fa tratran’ny valanaretina coronavirus eto amintsika noho ny fisian’ireo tranga vaovao voamarina miisa 17 ny asabotsy sy omaly alahady. Tranga fifampikasohana tamina teratany vahiny iray marary, ary efa nitety faritra maro teto amintsika no anisan’ny nampitombo ny isa.
Hiova ny paikady amin’ity herinandro ity. «Mampanahy fa efa nisy fifampikasohana. Tsy maintsy hitombo ny fepetra amin’ny herinandro. Hivory avokoa ny tompon’andraikitra», hoy ny filoha Rajoelina, ny asabotsy alina teo. Notantarainy tamin’izany fa tranga fifampikasohana no nahazoan’ireo olona roa amin’ireo 43 tratran’ny coronavirus ireo, ny faran’ny herinandro teo. Izany hoe, olona ivelan’ireo nandeha zotra avy any ivelany ary teto Madagasikara ihany ireo voa ireo. Anisan’izany ny fifampikasohan’ny vazaha mpizahantany iray efa nody any ivelany tamin’ny mpamily sy ny mpiseradia teto amintsika.
Nandalo ny lalana RN7 sy RN2
Anisan’ny lalana nolalovany ny nihazo ny lalam-pirenena fahafito (RN7) toy ny tany Behenjy sy Ambatolampy tao amin’ny mpanao vilany. Nihazoan’Antsirabe sy ny tsenan’Asabotsy ka hatrany Betafo. Teo koa ny fandalovany tao amin’ny hotely “les trois metisses” etsy Tsiazotafo, sy Ankorondrano ary Ambodihady sy Ivato. Ny tany amin’ny lalam-pirenena faharoa (RN2), hatrany Moramanga, Andasibe sy ny tao amin’ny sekolin’ny zandary. Ny tany Ambatomanga sy teny Antanimora. Ny teny amin’ny toerana ambony «La Haute ville». Nisy hotely fandraisam-bahiny sy toeram-pisakafoana ary toeram-pivarotana lehibe avokoa nandehanany tamin’ireo toerana ireo.
Ankoatra izany, tratran’ny covid-19 vokatry ny fifampikasohana koa ny olona iray nandray vazaha mivady, teto Antananarivo.
Tranga coronavirus voalohany any Morondava
Nambaran’ny filoha tamin’izany koa fa tsy nahitana tranga coronavirus ny tany Mahajanga tamin’ny fitiliana natao. Na izany aza, mbola hiverenana hatao ny fitiliana.
Etsy andaniny, tranga voalohany amin’ny covid-19 any amin’ny faritra ny any Morondava. Efa raisina an-tanana izy io amin’izao fotoana izao.
Na izany aza anefa, nanambara ny filoha Rajoelina fa efa misy ny hetsika hatao. « Hisy ny «clinique mobile», fiara ahitana fitaovana samihafa, handeha hitety ireo toerana ahiana. Ho avy tsy ho ela ny fitaovana hanampiana isa ireo fitaovana fitiliana. Hofaninana koa ireo «biologiste » eto amintsika », hoy izy. Mbola naveriny indray fa hiova ny fandaminana sy fandrindranany asa, manoloana izao tranga fifampikasohana (cas contact) izao. Nentaniny hatrany ny rehetra mba hanaja ny toromarika, indrindra fa ny fihibohana. Hany tokana fanafodin’io valanaretina io.